> Resource> YouTube> Olee otú Download YouTube Videos ka iPhone
Chọrọ ibudata YouTube video na gị iPhone maka playback ke laa? Ị na ọ bụghị naanị nke a. Ị na-elele YouTube videos online achọ a nnọọ ngwa ngwa njikọ Ịntanetị ma ọ bụ WiFi netwọk. Ma internet njikọ na WiFi netwọk na-adịghị n'ebe nile. N'ihi ya, ọ bụ ezi echiche ibudata YouTube videos ka iPhone maka playback offline. Na ozi ọma bụ na ọhụrụ iPhones ga-oru na September 10th. Ọhụrụ iPhone nwere ike aha dị ka iPhone 5S na iPhone 5C. Mgbe ị na-ndị smart Ngwa, ị nwere ike ịbụ ihe njikere na-ekiri YouTube videos na ha.
Dị ka ị maara, YouTube website adịghị enye online nbudata ọrụ. Mgbe ị chọrọ ibudata YouTube videos ka iPhone, Wondershare AllMyTube (AllMyTube maka Mac) bụ a aka nke ukwuu. Na dị nnọọ ole na ole clicks, ị nwere ike ibudata na tọghata YouTube ọ bụla ụdị nke iPhone, gụnyere iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5 na ọhụrụ iPhone 5S / 5C.
Download usoro ihe omume na-enweta ya arụnyere na kọmputa gị. Lee ndị dị mfe nzọụkwụ on otú iji ya.
1 One click ịzọpụta YouTube video
Play YouTube video na ihe nchọgharị gị na pịa Download bọtịnụ na mgbago mgbago aka nri. Na i nwekwara ike iṅomi URL nke video na pịa Paste Url bọtịnụ na usoro. Ma nke ụzọ abụọ nwere ike mezuo nbudata ọrụ.
2 tọghata YouTube ka iPhone format
Pịa tọghata bọtịnụ na nri nke video egosi na ebudatara Atiya na họrọ iPhone ka mmepụta usoro. Mgbe videos na-converted, i nwere ike ịhụ ebe ha na-echekwara na mgbe nyefee gị iPhone aka.
Rịba ama: Na isi window, mgba ọkụ na "Download mgbe ahụ tọghata" button n'elu nri akuku na họrọ gị iPhone nlereanya na mmapụta format ndepụta. Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ibudata ma tọghata YouTube videos spontaneously.
Lee n'okpuru a nzọụkwụ-site-nzọụkwụ video nkuzi: